သစ္စာအလင်း: နိက္ခမ္မပါရမီ သို့ ဦးညွှတ်ပူဇော်ခြင်း (မာရ်နတ် ၏ ဆဋ္ဌမ တပ်မ- ဘီရူ)
နိက္ခမ္မပါရမီ သို့ ဦးညွှတ်ပူဇော်ခြင်း (မာရ်နတ် ၏ ဆဋ္ဌမ တပ်မ- ဘီရူ)
((ဆရာကြီး ဦးရွှေအောင်၏ ဗုဒ္ဓ-လောကသား တို့ ၏ အနှိုင်းမဲ့ ကျေးဇူးရှင်( ကိုယ်ကျင့်ဗုဒ္ဓဝင် ) -စာ-၁၅၅ ကို မှီငြမ်း ကိုးကားရေးသားပူဇော်ပါသည်။))
မနေ့က တော့ စက်ရဲ့ ဖန်တီးမှု ဖြင့် အေး မြသော စာသင်ခန်းတစ်ခု မှာ မဟုတ်ပဲ အပြင်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် တွင် တနေကုန် လှုပ်ရှား လိုက်သောအခါ…. ချွေးများ အဆက်မပြတ် ထွက်လာကာ သုတ်လို့ ပင်မနိုင်….။ အလေးချိန်တိုးလာသော ခန္ဓာ ကိုယ်ကို ထမ်းပိုး ထားရသော ခြေထောက်သည် နာကျင်ယောင်ရမ်း ခဲ့တယ်..။
ငယ်ငယ် အသက် ၂၀ ဝန်းကျင် ကရေဆင်းမှာ နေစဉ် ၇ မိုင် တောလမ်းခရီးကို မညည်းမညူ ဖြတ်သန်းလျှေက်လှမ်း ခဲ့ဘူးသော်လည်း …။ အခုတော့ ဇရာ က ဇာတိပြလေပြီတကား ။ သုံးစွဲ ခိုင်းစေ လွန်းခဲ့သော ခန္ဓာကိုယ် စက်ယန္တယား သည် ထစ်ငေါ့ တုန်ယင်ခဲ့ပါပြီ..။
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်နော်….. စသည်ဖြင့် သတိပေး စကားများစွာ ကြားခဲ့ဘူးသော်လည်း ။
ဂရုစိုက်ပါသော်လည်း ကောင်းမလာ တော့သော ဒေါင်ဒေါင်မြည် ကျန်းမာခြင်း သည် *လာဘ် ကြီး တစ်ပါး* ဟူသော နာမည် ဖြင့် အနတ္တ တောမှာ မင်းမူနေခဲ့တာ… ပြန်ယူလို့ လည်းမရနိုင်။ ထိုအခါ ကျွန်မ သည် ..*ဘီရူ* ကိုသတိရမိပါတယ်..။
ဘီရူ ဆိုတာကတော့ မာရ်နတ်မင်း ရဲ့ ဆဋ္ဌမ စစ်တပ် ဖြစ်ပါတယ်..။ ခန္ဓာ ကိုယ်ကလည်းပင်ပန်း ၊ အိပ်ရေး ကလည်းမဝ ဖြစ်သောအခါ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကြောက်ရွံ့ မှု ဆိုသော * ဘီရူ * သည် ဝင်လာ တတ်ပါတယ် .. တဲ့ ။
ထို ဘီရူ ကို ကြောင့်ကြ စိုက်ပြီး မိမိ လုပ်ငန်းကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပဲ ရပ်တန့် လိုက် တယ် ဆိုရင် မာရ်နတ် ရဲ့ ဆဋ္ဌမ စစ်တပ်မှာ ကျဆုံးတယ် လို့ ဆိုပါတယ်..။
အမှန်တကယ် တော့လည်း အများအကျိုးအတွက် ရည် ရွယ်သော စိတ်သည် နှယ်နှယ် ရရ ကုသိုလ် စိတ်မဟုတ် ပါ။။ အလွန်အင်အား ကြီးမားသော စွမ်းရည် သတ္တိကို ပိုင်ဆိုင်သော ကုသိုလ် စိတ်ဖြစ်ပါတယ်..။
ထို ကုသိုလ် စိတ် ကြောင့် ဖြစ်သော စိတ္တဇ ရုပ်များ သည် မကောင်းသာ အကုသိုလ် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စိတ္တဇ ရုပ် အန္တရာယ် များကို ပယ် နိုင်သည်သာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါကြောင့်မို့ လို့ *ဘီရူ* ကို ကျွန်မ ဘယ်လို ကျော်လွှား ရမလဲ သိချင်စိတ်ပြင်းပြခဲ့ပါတယ်..။ ရှေးရှေး ကျမ်းပြု ဆရာများက သူတို့ ရဲ့ ကျမ်းဦးပမာဏ ၌ အများအတွက် ရည် ရွယ် လုပ်သောအခါ * ရတနာ သုံးပါး* အပေါ် ကိုးစားယုံကြည်မှု ဖြင့် လုပ် သင့်တယ် လို့ ဆိုကြပါတယ်..။
ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်း ယုံကြည်ကြပါတယ်..။
ကျေးဇူးတော် ရှင် ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး ရဲ့ * ဘီရူ * နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ မိန့်ကြားချက် ကတော့မှတ်သား လိုက်နာစရာကောင်း လှပါတယ်…။
*** အကျိုးမဲ့ သေခြင်း မျိုး ဖြင့် သေခဲ့ရသော ဘဝပေါင်းကားမရေ မတွက်နိုင်လောက်အောင် များလှပါလေပြီ ။ ယခု လို အကျိုးရှိရှိ သေခြင်း မျိုးဖြင့် မသေခဲ့ ရဖူးသေးချေ..။
ယခုလို အကျိုးရှိရှိ သေခြင်း မျိုးဖြင့် သေချင်နေသည် မှာ ကြာလှပါပြီ။ သေချင်သေပါစေ ။ နည်းနည်းမှ မလျှော့ *** ဆိုတဲ့ခံယူ ချက် ဖြင့်သာ လုပ်ပါက ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သော ကြောက်ရွံ့မှု * ဘီရူ* ဖြစ်စရာ အကြောင်း မရှိ ပါ***** ဟု ဝေဘူ ဆရာတော် ဘုရားကြီး ကမိန့်ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်..။
ထို ကဲ့ သို့ အများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် သော မိမိ ရဲ့ စေတနာ စွမ်းအားကို ယုံကြည်ပြီး လုပ်ကိုင်ပါက ကြောက်ရွံ့ မှု --ဘီရူ ကို အောင်နိုင်ပါတယ် တဲ့..။
အမှန်တကယ် လေးနက်စွာဆန်းစစ်ကြည့်မယ် ဆိုပါက ..။။ ကျွန်မ တို့ အားလုံး မှာ *ငါ---ငါ့ဥစ္စာရှိနေတယ် ဆိုတဲ့အထင်** သက္ကာယဒိဋ္ဌိ** နဲ့ သံသရာ မှာ အစွဲနာ ….ကာသံသရာရှည်လာခဲ့တာ..။
ဒီအစွဲ ကြောင့် ပဲ ….ပရဟိတတွေ..တရားအားထုတ်တာတွေ …ဒါတွေ လုပ်နေရင်…ဘယ်လို စားရမလဲဘုရား ၊ ရှေ့ရေး ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဘုရား ၊ နောင်ရေး စိတ်အေး ရပါ့မလား ဘုရား … ဆိုတဲ့မေးခွန်း တွေ ပြန်ပြန်မေးပြီး ….. လမ်းကြောင်းပေါ်မှ သွေဖီသွားကြတာ….. ။
အနိမ့်ဆုံး သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်တဲ့ *ကမ္မဿကတာ သမ္မာဒိဋ္ဌိ * ဖြင့် ပင် အမှန်မြင် နိုင် ယုံကြည်စိတ်ချ နိုင်စွမ်းတွေ အားနည်းရတော့တာပါ..။
ဒီ *ဘီရူ * ဆိုတာကလည်း အဲဒီငါစွဲ ကြောင့်ပဲပေါ်လာတာ အမှန်ပါ..။ အကယ် ၍ သာ *ငါ* မရှိပါက ငါ့ကျန်းမာရေး အတွက်စိုးရိမ်ကြောင့်ကျ မှု * ဘီရူ* သည် လည်းပေါ်ပေါက်လာ မည် မဟုတ်ပါ..။
ဒါကြောင့်….. အရေးအကြီးဆုံးအချက် အဖြစ် အစဉ် သတိပြုရန်မှာကား ဘယ်လုပ်ငန်းကို ပဲ လုပ်လုပ် *ငါ* မပါ ဝင်လေအောင်….။
အကယ်၍ …*ငါ* ပါဝင်လာပါကလည်း *ငါ* ကို ဦးစားမပေးမိအောင် အားထုတ်ဆောင်ရွက် ကြမယ် ဆိုရင် ….။
*ဘီရူ * ဆိုတဲ့ မာရ်နတ် ရဲ့ ဆဋ္ဌမ စစ်တပ် သာမက ပဲ အရာရာ ကို အောင်မြင် မှာ မလွဲ ပါဘူးရယ် လို့သာ…. ယုံကြည်လေးမြတ်မိပါတော့တယ်..။
(After6days training )
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 11:07 AM